चितवनमा धारिलो हतियारले हानेर कांग्रेस युवाको हत्या – Sandes Post
चितवनमा धारिलो हतियारले हानेर कांग्रेस युवाको हत्या
May 9, 2022 578
चितवन – चितवनको भरतपुरमा एक युवाको हत्या भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।हिजो साँझ ७ः३० बजे भरतपुर १२ निवासी अनिल परियार (कान) को धारिलो हतियार प्रयोग गरि हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका
घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । परियार गत वर्ष मात्र चितवन कारागारमा एक वर्ष कैद सजाय भोगेर रिहा भएका थिए । आन्तरिक विवाद र लेनदेन कारण घटना भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । परियारसंग केहीमहिनादेखि भारतीय एक नागरिकको उठबस रहेको र घटनामा उनकै संलग्नता हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ ।
घटनापछि आज विहान भरतपुरका दुई चोकमा टायर बालिएको छ । मिलनचोक र आस्था चोकमा टायर बालिएको हो । टायर बालेको क्षेत्रमा कोही देखिदैनन् । कस्ले टायर बालेको भन्ने थाहा नभएको प्रहरीले जनाएको छ । विहानसम्म प्रहरीले घटना कस्ले र किन ग¥यो भन्ने पत्ता नलागेको जनाएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चितवनमा अपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन् ।
Prevमहानायक राजेश हमाल कति धनी छन् ? कति छ उनको सम्पति ?
Nextआज वैशाख २७ गते मंगलवार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल